“ओलीले बालकोट पुगेर भने, ‘माधव नेपाल,लाई अब स्वीकार्न सकिँदैन’नेपाल् लाई पार्टीमा कुनै पनि इस्थान छैन! – मेचीमहाकाली डट नेट NEWS
“ओलीले बालकोट पुगेर भने, ‘माधव नेपाल,लाई अब स्वीकार्न सकिँदैन’नेपाल् लाई पार्टीमा कुनै पनि इस्थान छैन!
“।काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टीका माधव नेपालहरूका कारण एमाले सरकार ढलेको भन्दै कमजोरी स्वीकार गरेर आए पनि माधव नेपाललाई भने स्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन् ।”
“बालुवाटार छाडेर निजी निवास बालकोट पुगेपछि कार्यकर्ता र समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीमा स्थान नरहेको बताए । तर, उनीसँग लागेर विपक्षीलाई सत्ता बुझाउनेहरूलाई भने गल्ती स्वीकार गरेर आए यथोचित जिम्मेवारी दिइने बताए ।”
“बालुवाटार छाडेर निजी निवास बालकोट पुगेपछि कार्यकर्ता र समर्थकलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले माधव नेपाललाई पार्टीमा स्थान नरहेको बताए । तर, उनीसँग लागेर विपक्षीलाई सत्ता बुझाउनेहरूलाई भने गल्ती स्वीकार गरेर आए यथोचित जिम्मेवारी दिइने बताए:, ।
“आफूलाई कुनै गल्तीविना अकारण हटाइएको ओलीको दाबी रहेको छ।”
Previous “कर्मचारीलाई, अर्थमन्त्री शर्माले भने– काम छोडेर चाकडी गर्न नआउनु,
Next “ओलीका समर्थक युवाहरु,ले गरे ,माधव नेपालको घर घेर्ने तयारी”